ဒီလို မျိုး အကြောင်းလေး ကို ရေးလို့ အင်မတန် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မာန်အောင် (မောင်အံ) ရယ်။
Post တွေ က ” နေ့မြင်” “ည နောက်ရောက်” ဆိုတော့ တစ်ခါတစ်ခါ နေ့လည် မှာ ဖတ်ထားပြီး မှတ်ချက်ပေးဖို့ စဉ်းစားထား။
ညရောက်တော့ အသစ်တွေ့တာ ဖတ်ပြီး နေ့လည် ကဟာ ကို မပေးဖြစ်တော့။
ဒီလို နဲ့ အချိန် ကလဲ မရ နဲ့ ကိုယ်မှတ်ချက် မပေးဖြစ်ခဲ့တာ တွေ အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။
အမှန်တော့ အားလုံး ကို ကြိုးစားဖတ်ပါတယ်။
မနေ့က စပြီး ခေါင်းစဉ်ကြည့်ပြီး တစ်ချို့ ကို လုံးဝဝင်မဖတ်ပါ။
အသစ် တွေ ဆိုရင် ကြိုးစားတော့ ဖတ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကိုယ်အားသန် တဲ့ အကြောင်း မဟုတ်ရင် မှန့်ချက်ပေးဖို့ ခက်တာမို့ မပေးဖြစ်တာ စိတ်မရှိကြပါနဲ့။
ပြသနာက – တစ်ခါတစ်လေ နောက်ချင်ရင် တစ်ကြောင်းလောက် နဲ့ ဖြစ်သွားတတ်တယ်။
အမှန်တော့ အဓိပ္ပါယ်တော့ မရှိဘူး။
နောက် အရီး လဲ ဆင်ခြင်ဖို့ ကြိုးစားပါ့မယ်။
ဒီနေ့ ကတော့ အလုပ်မှာ ကျောင်းပိတ်ရက်မို့ ဂလေရိုက်နေနိုင်လို့ အချိန်ပေး ရိုက်နေတာပါ။
ပုံမှန်ဆို ညမှ မှတ်ချက်ပေးနိုင်တော့ အားလုံး ကို အများကြီး ကျကျနန မရေးနိုင်။
အားလုံး ကိုလဲ အားပေးချင်။ အဲဒါ နဲ့ အားပေးသွားတယ် တွေ ဖြစ်ကုန်တာ။
နောက်ဆို အားလုံး ကို ကြိုးစားဖတ်ပြီး အားပေးပါ့မယ်။
ကိုယ် မဆွေးနိုင် တဲ့ ခေါင်းစဉ် (သို့) အချိန် မရှိ လို့ မှတ်ချက် များ မပေးနိုင်ရင် နားလည် ပေးကြပါလို့။
အလွန်ကောင်း တဲ့ Post လေးမို့ လက်သီးလက်မောင်းတန်း အားပေးသွားပါတယ်။
(အမှန်က စာရိုက်နေရင်း လက်ညောင်းလာလို့ :lol:)
ခြောက်မျက်နှာရေ…မြန်မာစာကို လက်ညိုးနဲ့ တချောင်းထိုးရိုက်နေရတော့ တခါတလေ အများကြီးဆွေးနွေးချင်ပေမယ့် တိုတိုနဲ့ လိုရင်းကိုပဲ မန့်ခဲ့ရတာပါ။ ကြိုးစားပါမယ်ဗျို့…..။
ဒီကိတ်စ ကို တော့ ကန့် ကွက်တယ်
အူးဗိုက်ကြီး နဲ့ ကျုပ် နဲ့ ၊ ခင်ဗျားလဲ ပါတယ်
တက်သမျှ ပို့ စ် ဒိုင်ခံ ကွန်မင့်နေကြတဲ့ဟာကို
အခုမှ မုန်လာဥ မလုပ်နဲ့ ။ ဒါဘဲဗျာ
ဘူးဘူးဗျရော… ဟိုက် ဆိုင်ကယ်အိတ်ဇောထဲက ဆီချေးတွေ အူးဗိုက်ကြီး မျက်ခွက် သွားစင်ပြီ
ဟိတ်လူ နေအုံးလေ ကျွန်တော်လဲ လိုက်မယ်… ဘယ်ဆိုင်သွားမလဲ… ဟဲဟဲဟဲ.. သများလဲ ရင်ပူနေလို… အတူတူသွားမှာပေါ့ဗျာ… ကပေနှယ့်
ဟဲ့ဟဲ့ နာကိုလည်း စောင့်အုန်း
အရင်တခါလို အင်ဂျင်ဝိုင်ကို အပေါက်မှားမထဲ့နဲ့နော်
အရီးခင်လတ်ရေ. မာန်အောင်ဆိုတာ ရမ်းဗြဲကျွန်းပေါ်က မြို့ ပါ။
ကိုကြီးအံရေ အမှားရှာပြီး ထောက်ပြဝေဖန်ပေးချင်ပေမယ့် ကျနော်
ဟုတ်ကဲ့ပါ ကိုအံစာတုံးချင့် ။ နောက်ဆို သေချာသတိထား ဖတ်ပြီး ကွန်းမန့် ပေးပါ့မယ် ။ :D
အခုတလော စာတွေ ဖတ်ရင်း မျက်လုံးတွေ ၀ါးဝါးလာလို့ တချို့စာတွေ ကျော်ဖတ်မိတယ်။ ပိုစ့်တိုင်းလည်း ကွန်းမန့် မပေးမိဘူး။
အသက်လေးဆယ်ကျော်ပြီ ဖြစ်တဲ့ အန်တီပု
လာမဲ့နှစ်မှာ ၆၀ ပြည့်မှာပါကွယ် ။ သားသားဖရဲ မှန်းတာ လိုနေပါသေးတယ် ။ ဆံပင်တွေ တခေါင်းလုံးဖြူနေပြီ ဖြစ်သလို သွားတွေလည်း မရှိတော့ပါဘူးကွယ်။
လာထား ၁၀ ။ ဟဲ ဟဲ….
ဟ ဘာလဲ ဟ မျက်မှန်တလက် ဘယ်လောက်များမှတ်နေလဲ နင်တတ်ပေးပါလား…
သူများတက် ပေးလို့ .. မတော် မျက်လုံး ထိုးမိ ရင် ဘယ်လို လုပ်မလဲဗျ …။
ဒီလိုမျိုးလေးရေးထားတာ သဘောကျပါတယ် ။သတိထားစရာပါ …
လွန်ခဲ.တဲ. တစ်နှစ်လောက်ကလဲ ကိုပေတို. ကိုပေါက်တို. က ကွန်မန်.နဲ.ပါတ်သက်ပြီး သတိထား
စရာလေးတွေ ရေးခဲ.ကြဖူးတယ် ……
တစ်ချို.ပိုစ်တွေက Reply လုပ်ဖို. လိုပါတယ် …..ကျုပ်ဆိုရင် ပို.စ်တင်ပြီးရင် Reply လုပ်နိုင်ဘို.
အချိန်နဲလွန်းလို. အားနာပြီးပို.စ်တောင်မတင်ဖြစ်ဘူး …..
အခုတလော ဒုက္ခပေးနေတာကမျက်စိဆိုတော့ …
အသက်ရလာတော့ အနီးကြည့် ဒုက္ခပေးလာလို့ ပို့စ်တွေအားလုံးကို မဖတ်နိုင်တော့ဘူး …
ကွန်မန့်တွေပေးချင်ပေမယ့်လည်း အချိန်က ဒုက္ခပေးပြန်ရော ….
မျက်စိကောင်းပြီး အချိန်တွေပိုနေရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့ တွေးမိရင်း …
ဘာကိုကျေးဇူးတင်ရမလဲလို့ စဉ်းစားရင်း ….
ဒီလောက်တောင် သောက်ကြီးသောက်ကျယ် နိုင်မှတော့ မင်းပို့စ်ကို ကွန်းမန့်မပေးဘူးကွာ.. ဘာလုပ်ချင်သလဲ… :mad:
အင်းဆင်ခြင်စရာလေးတွေပေါ့။ အင်းခြောက်မျက်နှာရေညီးပြောမှပဲ စာကြောင်းများအောင်တော်တော် စဉ်းစားနေရတယ်ဟေ့။ တခါတလေလဲ ဘာမန့်ရမှန်းမသိလို့ မမန့်ဖြစ်ပါဘူး။ တခါတလေတော့လဲ နဲနဲနောက်တာပါ။ ခွင့်ပြုပါ ခွင့်လွှတ်ပါ ။ ဟီဟိ
ခွင့်ပြုတယ် ခွင့်လွှတ်တယ် ..
အပေါ်မှာ မိုးစက် မန့်ထားသလို..
လာထားတဆယ် ဆိုတာ ပိုက်ဆံရဖို့ကို ပြောလိုရင်း..
မဟုတ်ဘဲ သဂျီးကို ကြည်စယ်တယ်ဆိုတာလေး
ကိုမတ် ဖြည့်စွက်တာကို လေးလေးနက်နက် ခိုင်မာစွာ
နားလည် သဘောပေါက်ကြောင်း ..ထပ်လောင်း အသိပေးလိုပါရဲ့…
တစ်ဆယ်ရမယ် ဘာဖြစ်လဲ ဘာဖြစ်လဲ…
အောင်မယ်လေးစီးပွားဖြစ်နေလိုက်ကြတာ။ ဒီကလဲ ဘယ်မလဲတဆယ်။
အနော့်လည်း ချန်မထားကြနဲ့ဦးလေ ..
အနော်လည်း လိုက်မယ် ..
လာထား အနော့်ကိုလည်း တစ်ဆယ် .. :D
ဟဲ့ ခြောက်မျက်နှာ ရှည်ရှည်မန့်လေ။ ပိုစ့်ပိုင်ရှင်ကျေနပ်အောင်။ ဟဲဟဲ ဒီနေ့တော့ နာနေ့တွက်တယ်ကိုက်နေပါလား။ အင်း နောက်ထပ် ၁၀
ဒီ Post ကိုလဲထောက်ခံတယ်ဗျီု့။လက်မလေးလဲပါတယ်
ကြောင်အစုတ်ပလုပ်ဆိုတာ့ ရွာထဲမှာ တခြားကြောင်တွေရှိသေးတယ်….အာဟိ
ဟုတ်သားပဲဗျာ… ကြောင်ခွဲပြီး ပြောမှပေါ့… ကိုကြောင်ဝတုတ် မခံနဲ.
ဘယ်နှယ့်ဗျာ… ဒီကြောင်လေးတစ်ကောင်ပဲ ဂဲနဲဝိုင်းထုနေတာ
ဘာဖြစ်ဖြစ် လာထား ၁၀
ခင်ဗျားပို့စ်ဖတ်ပြီး ကွန်မန့်ပေးတတ်အောင် လုပ်အုန်းမဗျာ..
ကို အူးလေး ရာဇာအံ ဓါးငမြောက် ခင်ဗျား..
အစိကို အစိတိုင်း ရေးပြတာ ကောင်းဘာဒယ်..
များဒို့ ကလဲ အစိကို အစိတိုင်းပဲ ပြောချင်ကြဒါဘာ..
မှန်ရင် မှန်တယ်..မှားရင် မှားတယ်..
နားလည်ရင် ၀င်ဖောဒယ်..မလည်ရင် ၀င်မဖောဘူး..
တစ်ခါတလေ မကြီးမငယ်နဲ့တငယ်ပြန်ပြီး လိုက်လိုက်နောက်နေဒါတော့ ခွလွှတ်ပါခင်ဗျား.
အားလုံး..ပျော်စေ ပျက်စေ ကလက်စေ သဘောပါ..
ကွန်းမန့် ပြဿနာကတော့ ရှင်းလိုက်မယ်ဆို စိန်ဗိုက်ကလေးတို့ထိပ်ဆုံးက စမ်းကမ်းဖောက်နေသမို့ ..
ရှေ့ မျက်နှာနောက်ထားပြီး ၀င်အားပေးခဲ့ပါတယ်..
ခွလွှတ်တော်မူပါ အူးလေးရာဇာအံ ဓါးငမြောက်ခင်ဗျား.
အဖျက်အမှောင့်လို့ ယူဆတဲ့ (အမဲရောင်) ပိုစ့်မျိုးတွေဆိုရင် အပြန်အလှန် တိုက်ခိုက် ဆဲဆို ပြောဆိုနေကြမယ့်အစား ကွန်မန့်မပေးပဲနေတာက ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။
အရင်က တင်သမျှပိုစ့်တွေ အကုန်ဖတ်၊ ဖတ်သမျှ အားလုံးလိုလို ကွန်မန့် ပေးဖြစ်ပေမယ့်…
ခုနောက်ပိုင်း အချို့ပိုစ့်တွေဆို ရေးသူကြည့်ပြီး ဖွင့်တောင်မကြည့်ဖြစ်တော့ဘူး။
ဒါပေမယ့် အချို့ အရမ်းကောင်းတဲ့ (ဥပမာ- တိမ်ယံသစ္စာ လိုမျိုး) ပိုစ့်တွေ ကိုလည်း
ကွန်နက်ရှင် ညံ့ဖျင်းမှုကြောင့် ကွန်မန့် မပေးနိုင်ပြန်ဘူး။
ကိုယ်တင်တဲ့ ပိုစ့်မှာကျတော့လည်း ကွန်မန့်လေးတွေ မျှော်မိပြန်ရော။ :D
ဒီဂေဇတ်ထဲက ရွာသူားတွေကို အရမ်းခင်တယ်
အဲလို ကွန့်မန့်ပေးတာနဲ့ တွက်ကပ်နေရင်
ဒီလိုတော့လဲဖြဲဒီး က မှန်သွားပြန်ရေ။ အော်ပေးမိပြန်ပြီတကြောင်းထဲ။
အရင်တစ်ခေါက်ကလဲ ဘူလဲတိဘူး ကောမန်.တိုတာ မမေးဖို. ပို.စ်တင်သေးတယ်ထင်တယ်… အဲဒီတုန်းကလဲ တားတားတို. ၀င်အမုန်းခံသေးတယ်.. အခုတော့ ပြောတော့ပါဘူးအေ…
လိုချင်လို.ပဲ ပေးပေး ပေးလို.ပဲရရ တိုတိုရှည်ရှည်
ဦးလေး အံဇာ ကတော လုပ်ပီ…
အပေါ်ပိုင်းလေးကို ဖတ်ပီးတော့ ဦးလေးကို လေးစားနေရာက..
အောက်လဲရောက်ရော ငါး လျော်ရမလိုဖစ်နေပီ..အဲလေ မှားလို့
အောက်ပိုက်းလဲရောက်ရော အဖျားကြီးက ဘာလို့ ရှုးတွားရတာတုံးးးးး
ဟီးးး စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းပြောတာပါ..စိတ်ဆိုးပါနဲ့ ….
ဟုတ်ပါတယ် တချို့ ကွန်မန့်တွေက ပိုစ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ကွန်မန့်တွေတွေ့ရတယ် ….
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လဲအပါအ၀င်ပေါ့ …စချင် နောက်ချင် ရင်းနှီးတဲ့သဘောလေးတွေ ပြတဲ့သဘောဖြစ်မှာပါ …
ဥမပါ .ဗိုက်ကလေးပဲကြည့် သူများကွန်မန့်ဆို Reply လုပ်ပြီး ကပ်ဖဲ့သွားတတ်တယ်….:D
ကျေးဇူးပြု၍ ဥမပါ .ဗိုက်ကလေးပဲကြည့် အစား
ဥပမာ..ဗိုက်ကလေးပဲကြည့် ဟူ၍ ပြင်ဆင်ဖတ်ရှုကြပါကုန်
ဟားးဟားးးးတကယ်ကို လွဲသွားတယ် ဦးဗိုက်ရေ ..ချောတီးပါ ဗျာ … :D
ကောင်းပါတယ် အားပေးသွားပါတယ် နော
အင်း ဒီလိုဆိုတော့လဲ မရဘူးတဲ့
ဟိုလူ ကြီးလို လက်မထောင်ပါတယ် ပါ ထည့်ပြောရမှာလား
ကောင်း လို့ ကောင်းတယ် ပြောတယ် ဗျာ
ကြိုက်လို့ အားပေးတယ် ဗျာ
အားနေလို့ လက်မ ထောင်တယ် ဗျာ
လောလောဆယ် ၁၀ ယူမယ်
မကြိုက်ရင်ထပ်ပြော နောက်ထပ် ၁၀ ထပ်ယူဦးမယ်
ကောင်းလို.ကောင်းတယ်ပြော တာ ပြောသာပြော
အားလို.လက်မထောင်တာ ထောင်သာထောင် … (လက်မ)
လောလောဆယ် ၁၀ ယူမယ် ယူသာယူ… သများလဲယူမယ်နော်.. ဟိဟိ
စာရိုက်လို့ကောင်းတဲ့ ကွန်ပျူတာနဲ့မှ ပြန်လာဦးမယ်…
အခေါက်ရေများမှ ကိုယ့်အတွက် ကျန်မှာ
ကျုပ်တို့ ကတော့ သုံးကြောင်း ဆွဲပြီးသွားပြီ
သဂျီးတင်းပြီး ဖျက်မယ်ဆိုရင်တော့ သုံးကြောင်းစာ ခြောက်ဆယ် နုတ်ခံရမယ်
အဟိ..လူကြီးက စောင့်ခိုင်းထားတာ ..
မြန်မြန်လာခဲ့ နောက်ကျရင် ပန်းကန်ဆေးရမယ်
အာ .. အတော်နောက်တာပဲ ..
အဟိ .. တစ်ဆယ် အဂန်း!
ဟဲ့ ဟဲ့ ဘာတွေဖစ်နေတာလဲ
လာထား ၁၀ တွေ များနေလို့
သူကြီးက ဒီပို့စ် မှာ မန့်တဲ့သူတွေကို
သူက ၁၀ မပေးတော့ပဲ
ကွန်မန့် တစ်ခု ၁၀ ပြန်ဖြတ်ပါမယ်တဲ့
သူကြီး ရော့ ၁၀
စာကို သေချာဖတ် ဖရဲမရဲ့ …
နာက တွေ့တာကို ဗဟုသုတ အနေနဲ့ တင်လိုက်တာ ..
လုပ်ပါမယ်လို့ ဘူဂ အာမခံထားလို့လည်း ..
ညည်းဒို့ သိဒဲ့အတိုင်း နာကရော ဘာမို့လို့လဲ ..
ဆိုင်ဆိုင် မဆိုင်ဆိုင် ..
ရွှတ်နောက်နောက် လျောက်မန့်နေတဲ့အကောင် …
ခုဟာဂလည်း ဂလိုလေး မန့်ရင်တော့ ကောင်းတယ်လို့ ပြောဒါ ..
ကွန်မန့်ဒွေ အားလုံး လျောက်ဖတ်လိုက်ဒါ ..
လာထား တစ်ဆယ်တွေက များနေဒယ် …
တကယ်ဘဲ စိတ်လေဒယ် …
မန်းဂေဇက်မှာတင်တဲ့ ပိုစ့်တွေဟာ အရောင်အသွေးလဲစုံ၊ ရသလဲစုံပြီး တကယ်ကောင်းမွန်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မန်းဂေဇက်ရဲ့ အဓိကဆွဲဆောင်မှု့က ပိုစ့်တွေချည်းမဟုတ်ပါဘူး..။
စိတ်ဝင်စားစရာ လေးစားစရာ သိမှတ်စရာကောင်းလှတဲ့
ပိုစ့်တွေကောင်းတာက စာရေးသူက အရေးကောင်း အတွေးကောင်း အားထုတ်မှု့ကောင်းတာကို ညွှန်ပြပါတယ်..။
ရွာသားတွေ ချစ်ခင်တာ စည်းလုံးတာ ညီညွတ်တာ
ပွင့်လင်းလွတ်လပ်တာ ပညာပြည့်တာတွေကို ဖေါ်ညွှန်းပါတယ်…။
ကျုပ်ကိုရွာထဲစရောက်အောင် ဆွဲဆောင်တာ ကွန်မင့်တွေပါ
တိတိကျကျပြောရရင် သူကြီးရယ်၊ ကိုကြောင်ကြီးရယ်၊ ကိုအောင်ပုရယ်၊ ဆူးရယ်၊ မမ ရယ် – အဲဒီငါးယောက်ရဲ့ကွန်မင့်တွေကိုဖတ်ပြီး
ဒီရွာရဲ့ အရည်အသွေးကို ကြိုက်လွန်းလို့ ကိုယ့်ထက်သာတဲ့သူတွေကြားမှာ ကျင်လည်ကြည့်မလို့ ရွာထဲဝင်ခဲ့တာပါ…။
ပြီးတော့ – တစတစ ရွာက ပိုစည်ပင်လာတယ်..။
တကယ့် လူတော်တွေ များလာတယ်..။
နာမည်တွေထုတ်ပြောရရင် (မသိတဲ့သူက) ဖါးတယ်ထင်မှာစိုးလို့ တယောက်နှစ်ယောက်ပဲ ဥပမာပေးချင်ပါတယ်…။
ဒီရွာက လူတော်တွေထဲမှာ –
အသက်ထက် အသိဥာဏ်က အများကြီးမြင့်နေတဲ့ လူငယ်တယောက်ပါတယ်…။ တလောက ဓါတ်ပုံကြည့်ပြီးမှ ဒီအရွယ်လေးပါလားလို့သိရပြီး ကျုပ်ဖြင့်အံ့သြအားကျလိုက်တာ…။
အားနဲ့မာန်နဲ့ ပြတ်ပြတ်သားသား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဝေဖန်နိုင်သူတဦးရှိတယ်။
အခြားတဦးကတော့ သူများပိုစ့်ကို ပြန်လှန်ဆွေးနွေးတာမို့သာ ကွန်မင့်လို့ပြောရတယ်-
နောက်တယောက်ကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု့အပြည့်နဲ့ မတူတဲ့အမြင်တွေကို ချပေးတတ်တယ်။ လက်ညှိုးထိုးပြတတ်တယ်။ လိုတာတွေကို ဖြည့်ပေးထောက်ပြတတ်တယ်။
အဲသလို အဲသလို ပန်းပွင့်ရောင်စုံတွေ သန်သန်စွမ်းစွမ်း လန်းလန်းဆန်းဆန်း ဖူးပွင့်ဝေဆာနေတဲ့ ပန်းခင်းကြီးနဲ့တူတဲ့ မန်းဂေဇက်ပါပဲ….။
(အဲဒီထဲမှာ ဆေးရိုးသည်နဲ့တူတဲ့ စမ်းချောင်းသား အဘိုးကြီးတယောက်လဲ ကန့်လန့်ကြီး ပါနေတယ်။ သူဝင်ရှုပ်မှာတော့ ပိုစ့်တင်သူတွေ ကြောက်ကြပုံရပါတယ်…. :D )
ဟုတ်ပါတယ် ဦးပါခင်ဗျာ ..
ဦးပါ ပြောသလိုပဲ မန်းဂေဇက်ရဲ့ အဓိက ဆွဲဆောင်မှုတွေက ပို့စ်ချည်း မဟုတ်ပါဘူး ..
ကွန်မန့်တွေကလည်း အဓိက အခန်းကဏ္ဍက ပါပါတယ် ..
ကျနော်တို့ ရွာထဲက ကွန်မန့်တွေကို ဖတ်မိသူတိုင်း ..
ဒီရွာကြီး စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ ချစ်ချစ်ခင်ခင် ရှိကြတယ်ဆိုတာ မှတ်ချက်ပြုလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် ..
ကွန်မန့်အတွက် ကျေးဇူးပါနော့ …
အုပါချည်ပဲ Best Comment ရွေးမနေနဲ့ 
နင့်တစ်လုံး ဘယ်ပျောက်သွားပြန်တုန်း ..
နင့်မလဲ အဲ့တစ်လုံးက ပေါ်လိုက် ပျောက်လိုက်နဲ့ ..
ဒါနဲ့ နင့်နာမည်ကို ဂလိုပေးပါလား .. ပိုပြည့်စုံသွားအောင် ..
ပေါက်စိန်ဗိုက် ဆိုပြီး … :D
ရွေးပေးမယ် BC တော့မဟုတ် BJ (best joker)
ချဉ်ဖတ်က ရွေးလိုက်ပါပြီတဲ့ ။ နောက်တခါ ၀စ်လစ်စလစ် ကိုယ်ဟန်ပြဖို့ အတွက်ပါတဲ့။
BB ( Best body ) အနေနဲ့ပါတဲ့။ :D
လာထား တစ်ဆယ် …
သိတဲ့လူဒွေ တားကြပါဦး …
သုံးတဲ့ အခရိုနာမ် ဒွေ ……
ရှော့ခ် ရှိလား မသိ မရှိလား မသိ…
မျက်စိထဲ အဲ့ဒါဒွေပဲ ပြေးပြေးမြင်လာလို့ …
အုပါ ကိုပဲ Best Comment ရွေးမှာပေါ့ကွယ် ။
ဦးပါ မှာက အုပါ တာကိုး ။
ကိုဗိုက်ကလေးမှာက ဥ မှမပါတာ ။
ခုနလေးတင်ကပဲ may july ကပြောထားတယ်လေ ။
ဥမပါ ဗိုက်ကလေးပဲကြည့် တဲ့ ။
တို့ရွာရဲ့သူကြီး သောက်တဲ့ဆေးက တော်တော်စွမ်းတယ်နော် ..
ဘယ်လောက်အထိ စွမ်းလဲဆိုရင် ဆေးကုန်သွားလို့ လွတ်ပစ်လိုက်တာတောင် ..
ပုလင်းအခွံက ထောင်လျက်သား ကျတယ် .. :D
ဦးခိုင် ကို ပြောခြင်း မဟုတ်ပါ..
လာထား ၁၀ ..
နားချ ဖြောင်းဖျ စည်းကမ်းပြတဲ့ ပို့ စ်မှ ဗိုက်ကလေး မွှေနေလို့ 
အု .. အုလေး .. ပေါက်စိန်ဗိုက် ..
အလဲ့ .. လန်းသွားပီ … :D
နာဂလည်း သူများတွေဒါ ပြောပြီး ..
ကိုယ်တိုင်ကျ ဘာမှဟုတ်ဘူး ..
ဘာဖစ်လဲ … ပို့စ်ထဲမှာ ပြောပြီးသားပဲ … :D
အခု ဖီးလ်သိပ်မလာလို့ ဖီးလ်လာတဲ့နေမှ အမှန်အကန်ဒွေ မန့်တော့မယ် ..
အုလေး ပေါက်စိန်ဗိုက် ဂလည်း အနော်တို့ကလည်း
ရွာကြီး စည်ကားနေအောင် လုပ်နေဒဲ့လူဒွေပဲ ..
သဂျီးက ဘာဖစ်လို့ တင်းရမှာတုံး ..
ဇာတ်တစ်ခုမှာ လူရွှင်တော်မပါရင် ရသ ဘယ်လိုလုပ် မြောက်မှာတုံးနော့ …
ခင်ဗျားက ရှေ့ကနေ အဲ့ဂလိုပြောလိုက်တော့ ..
ကျုပ်တို့က ဘယ်လိုဆက်မန့်ရဲတော့ မလဲဗျ..
ငွေတစ်ဆယ် ယူပြီး တခြားပို့စ်တွေ လစ်တော့မယ်.
အရင်ဆုံး လက်မတစ်ချောင်း ထောင်လိုက်တယ်။
၆ ချောင်းမြောက်လက်မက ကျုပ်လက်မပါဗျို့။
ကျုပ်ကတော့ ကွန်းမန့်တွေပဲ လိုက်လိုက်ဖတ်နေတတ်ပါတယ်….။
ကွန်းမန့်တွေဖတ်ပြီး လေးစားနေတဲ့လူတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ပါ ဦးဘလက်ကြီး ခင်ဗျာ ..
ကျေးကျေးပါ ခင်ဗျာ ..
ဒါနဲ့ ဦးဘလက်ကြီး လေးစားရတဲ့ ကွန်မန့်တွေထဲမှာ
အရီးလတ်ကွန်မန့်တော့ ပါလိမ့်မယ် ထင်သဗျို့ .. အထင် ..
အောက်က ဦးဇောက်ထိုးခင်ဗျာ ..
ကျုပ်တို့ တိုတိုဗိုက်က …
ဝိသေသတွေ ထည့်ချင်လို့ ထည့်တာ ဟုတ်ဘူးဗျ ..
သူ့ကလောင်တွေကို ကျုပ်မီသမျှ ပြောရရင် ..
ပထမဆုံး ပေါက်ဖော်၊ နောက်တော့ စိန်ပေါက်ပေါက် အခု နောက်ဆုံး ဗိုက်ကလေး ဖြစ်လာတာပဲ …
အဲ့ဒါမို့ ပေါက်စိန်ဗိုက် ဖြစ်သွားကြောင်းရယ်ပါလို့ … :D
မွန်ပညာရှိ ကြံစုပ်နည်း နဲ့ပေါ့လေ…
အရင်းအဖျား ခွဲသူကြီးလား ဗျ..
နာမည် မေ့နေလို့ …
မွန်ပညာရှိ အမတ်ကြီး သီဟပတေ့
၁၀ လိုချင်လို့ ဟုတ်ဘူး။
ကလေး တွေ သိအောင်လို့။
အပေါ်က ဟာက ၁၀ လိုချင်တာ မဟုတ်ကြောင်း ထပ်ဆင့် ရှင်းပြတာ။ ;-)
အရီးလတ်ပြောတဲ့ မွန်ပညာရှိက သမီးအဘိုးလေ ……. ကြုံတုန်းကြွားတာပါ ……. ၁၀ လိုချင်လို့ မဟုတ်ပါ …..
သည်လို မြေးမျိုး မွေးလာမယ် ဆိုတာ
သိမသွားရှာတာ အနှီပညာရှိကြီး လွှတ် ကံကောင်းတော့ သကိုး ….
ဦးဗိုက်ရှေ့က ၀ိသေသတွေ အတော်များလာသလားပဲ။ စိန်။။ ပေါက်စိန်။။ ဘီယာတို့။ အရက်တို့.တော့ မတွေ့မိသေးဘူး။
ကိုရာဇာကြီးရဲ့ ပို့စ်လေးကို အရမ်းသဘောကြတယ်။ စာရေးသူတွေဗိုက်ထဲ ၀င်ကြည့်ရေးသလိုပဲ။ ပို့စ်တင်တူ အမှန်အလိုချင်ဆုံးအရာကတော့ နွေးထွေးတဲ့ ဆွေးနွေးတင်ပြမှုပါပဲ။ အားလုံးကတော့ ကိုရာဇာ တင်ပြတဲ့အတိုင်းပါပဲ။
သူရို့ လုပ်ဒါနဲ့ ..
ချက်တောင် ချက်လာပီ ..
ဒီတော့ လစ်ပီဗျာ …
ကျနော့်ရဲ့ ပို့စ်မှာ လာရောက် တစ်ဆယ်ယူ .. အဲ .. လာရောက် အားပေးကြပါကုန်သော …
အရီးလတ်၊ ဦးညာ၊ မောင်ပေ၊ ကတိုက်စိုး၊ ဗြဲဒီး၊ ကိုနာဂ၊ အမပုခ်ျ၊ ကိုဆာမိ၊ မဝေဝေ၊ အုကြောင်ဂျီး၊ မသဲနုအေး၊ မိုးဇက်၊ အမတ်မင်း၊ တိုဂီ၊ ဦးပါ၊ MTY ၊ Fond belief Land ၊ ကိုကြောင်ဝတုတ်၊ ငဗိုက်၊ နိုဇိုမီ၊ ဦးဘလက်ကြီး၊ ဦးဇောက်ထိုး၊ မိုးဇက်၊ အဘဖော တို့အား …
ငဗိုက်မှာ ဥမပါဟု ပြောသော
mayjuly ကိုလည်း လာရောက်အားပေးတာ ကျေးဇူးပါနော့ ..
အဲ တူ ဥမပါ တာ မီး တိဘူေးနာ်…
မီးက မှားရေးထှာ ..:D
လာထား (၁၀) .. သူများပြောလို့ပြောကြည့်တာ ..ဟိဟိ
ကျန်ခဲ့တာလား။ ညီးခွဲခွဲပြီး ၁၀ ယူနေတာမသိမှတ်လို့။
ဘိုးဘိုးအံ .. အနော် ကျန်သေးတယ်လေဗျာ ..
မိုးဇက်က ဘာလို့ ၂ယောက်ဖြစ်သွားတာလဲဟင်
အဘတန်ခိုးနဲ့နှစ်ဆတိုးသွားကြောင်းပါ။ အင်း ၁၀
လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်လို့ မှ အထိန်းအချုပ်နည်းတယ်
တနည်းပြောရင် အယ်ဒီတာဆိုသူက ၀င်ဆရာမလုပ်တဲ့ အင်တာနက်ဝင်ပါတယ်ဆိုမှ
ဟိုလိုရေးပါ ဒီလိုရေးပါ ဟိုလိုမတင်နဲ ဒီလိုမတင်နဲ့လာလုပ်နေပြန်ပါပြီ.
သူများအကျိုးပျက်စီးအောင်ရေးတာကလွဲရင် လွတ်လွတ်လပ်ရေးပါ မန်းပါစေဗျာ။
မှန်ပါတယ် သူကြီး ထောင်ထားလို့ ဒီဆိုက်ပေါ်လာတာ။
ဒီဆိုက်ပေါ်လာလို့လဲ စာရေးသူတွေက ၀င်ရေးကြတာ။
တစ်ခါလာလဲ သူကြီးကျေးဇူး တစ်ခါလာလဲ သှူကြီးကျေးဇူး။
သိတတ်ပါတယ်ဗျ ကျုပ်တို့ကလဲ သူများကျေးဇူးသိတတ်တဲ့လူတွေပါ။
ကိုယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရေးလို့ရတဲ့ နေရာလေး ရှိလို့စာရေးနေ ဓါတ်ပုံတင်နေရတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
စာရေးသူ စာဖတ်သူ ဓါတ်ပုံတင်တဲ့လူ ဓါတ်ပုံကြိုက်တဲ့လူ မရှိရင် ဆိုဒ်တစ်ဆိုဒ်ဖြစ်လာနိုင်မလားဆိုတာပါ။
အင်တာနက်မှာဆိုက်ပေါင်းများစွာ ရှိတယ် ၀ါသနာပါလို့ ထောင်ထားတဲ့သူတွေရှိတယ်။
ဒါပေမယ့် စာတပုဒ်ဖြစ်လာအောင် တွေးရ အချိန်ပေးပြီးရေးရ
ဓါတ်ပုံတစ်ပုံလေး ရအောင် ရိုက်ရ။
(ကင်မရာငှားသုံးရင်တောင် ဓါတ်ခဲက အလကားမရဘူး)
ပုံလေးဖြစ်လာပြန်တော့  တင်ဘို့ပြင်ဆင်ရနဲ့အချိန် ငွေ ရင်းရတာပါဘဲ။
တစ်ခါလာသူကြီးကျေးဇူးကျေးဇူးဘဲပြောနေတော့ စာရေးနေသူ စာဖတ်နေသူက သူကြီးတောင် ညတိုင်း ဥိးချအိပ်ရမလိုဖြစ်နေပြီ။
အရှင်းဆုံးပြောရရင် လွတ်လပ်စွာ ရေးကြ မန်း ကြ လွတ်လပ်စွာကွဲလွဲကြ လွတ်လပ်စွာ ငြင်ဲးကြရအောင်ပါ။
ဟိုလိုလုပ်ပါ ဒီလိုလုပ်ပါ တွေကို မညွှန်ကြားကြပါနဲ့တော့။
အဲလိုမှ မဟုတ်ရင်လဲ မန်းလေးဂေဇက်မှာ အယ်ဒီတာ တစ်ယောက်သာခန့်လိုက်ပေတော့။
အခုလို တိုက်ရိုက်မတင်နဲ့ အယ်ဒီတာဆီကနေ ပိုစ်တွေရော ကော်မင်းရောသူ့ဆီက တစ်ဆင့်လာခိုင်း။.
ဒါဆိုကောင်းမှ တည်မှ ခန့်မှ ဆိုသူများရဲ့ စိတ်ကြိုက်သန့်သန့်လေးတွေဘဲတက်လာမယ်။
လေးပေါက်ကြိုက်တယ်ဗျို့ …….. လေးပေါက်ရေးတဲ့ ကော်မန့်လေးကို အပြည့်အ၀ထောက်ခံပါ တယ် …….. “အရှင်းဆုံးပြောရရင် လွတ်လပ်စွာ ရေးကြ မန်း ကြ လွတ်လပ်စွာကွဲလွဲကြ လွတ်လပ်စွာ ငြင်ဲးကြရအောင်ပါ။
အဲလိုမှ မဟုတ်ရင်လဲ မန်းလေးဂေဇက်မှာ အယ်ဒီတာ တစ်ယောက်သာခန့်လိုက်ပေတော့။”
သမီးလည်း မလွတ်မလပ်ခံစားနေရပါကြောင်း …… ထပ်လောင်းအတည်ပြု ထောက်ခံအပ်ပါသည် ……
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အိမ်ထောင်ရှင်များဆိုင်ရာ မဟုတ်မခံလွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်လောင်း
လေးလေးလိမ်….. အဲဒီနာမည်ကြီးက မကောင်းပါဘူးဗျာ….
ငါမအားတုန်း သူများတွေအနည်းဆုံး (၃၀)စီလောက်ရကုန်ပြီ….
ရောဂါတက်နေတာ DSLR ၀ယ်ချင်လို့အခု… မတတ်နိုင်ဘူးဗျာ
ဒါမျိုးက လက်ထဲ ရောက် လာမှ ငြိမ်သွားတတ်တာ မျိုး ဆိုတော့ ….
အူးလေးအံစာတုံး အူးလေးအံစာတုံး ပို့စ်၂ခု၃ခုမှာ ကွန်မန့်၁ခုထဲကို copy/paste လုပ်ပြီးတင်နေတဲ့လူရှိဒယ်ဂျ။ အဲဒါလေး ကြောပေးပါအုံး။
မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ပြန်အိပ်လိုက်အုံးမယ် ခွီး ခလော ;)
လက်မ ထောင်တယ် ပြောဖို့ များ မန့် ရတယ်လို့ဗျာ … လာထား .. လာထား ..
ဟိတ်မျက်နှာ ခြောက်ဖက်နဲ့ လူကြီးသူကြတော့ မရှိရှိတာတင်တယ်ဆိုပြီးပိုက်ဆံယူတယ်။ သများတွေ ကျတော့ ဟိုလိုမလုပ်နဲ့ ဒီလိုမလုပ်နဲ့ နဲ့ ပြောတယ်။ မရဘူး။ ပြောစရာရှိပြောလိုက်ပြီ။ သူများတွေလဲယူတယ်တို့လည်း ယူမယ်။ ဒါဗျဲ။ လာထား တစ်ဆယ်။
ဖြည့်စွက် ။ ။ ပို့စ်ထဲမှာ မကျေနပ်တာ၊ ပို့စ်ရဲ့ ကွန်မန့်တွေထဲမှာ မကျေနပ်တာ တွေ့တဲ့အခါ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ အသုံးအနှုန်းမျိုးကို မသုံးမိအောင် သတိထားပါ။ အတတ်နိုင်ဆုံး ယဉ်ကျေးတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေကို ရွေးပြီးသုံးပါ။ ထိုအသုံးအနှုန်းများကို မသုံးတတ်ပါက မျက်စိမှိတ်ပြီး မသိသလို နေလိုက်တာက အကောင်းဆုံးပါ။
ဒီလိုနေလာခဲ့တာ အတော်ကြာပါပြီ။ အားလုံးကို လေးစားတယ် ခင်မင်တယ်။ သံယောဇဉ်ဖြစ်တယ်။ ဖတ်တဲ့ပိုစ့်တွေကိုတော့ အတော့်ကို သဘောကျရင် ကော့မန့်ပေးပါတယ်။ ပိုစ့်တိုင်းတော့ ကော့မန့်မပေးပါဘူး။ ပေးဖို့လည်း အချိန်မရှိပါဘူး။ နောက်တစ်ချက် ဖတ်ဖို့အချိန်ကလည်း မလောက်တာလည်း ပါပါတယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်ထဲရှိတာကို ချပြခွင့်တော့ ပေးသင့်ပါတယ်လေ…
ဒီဆိုက်က သူကြီးဆီက ငွေတွေသဲ့ယူနေပါတယ်ဗျို့။ သဂျီးဒီတိုင်းကြည့်နေတော့မှာလား…….
ဒါနဲ့ပဲ သဂျီးမွဲလိမ့်မယ်……..ပေး..၁၀ ။ ဟိ။
၀င်ပြီးကြည့်သူများလေလေ သူကြီးက ကြော်ငြာခတွေရလေပါဘဲ။
အမှတ်တွေသာ ပေးတယ် ရတယ်ဆိုဖြစ်နေတာပါ တစ်သိန်းမပြည့်မခြင်း ဒီအမှတ်တွေက ကိန်းသေတွေပါ
ဒီတော့ သူကြီး ကုန်မှာကို တွေးမပူပါနဲ့တော့အေ။
ဟိုက်ရား… သူတို့တွေ တစ်ဆယ် အလီလီ ယူနေကြပါပေါ့လား…
သဂျီး ပိုက်ပိုက်အိပ် က လဲ သုံးရွေ့မကုန် လှုရွေ့ မခန်းတဲ့ အိပ်ကြီးပါလား..
ကျုပ်လဲ တစ်ချယ်ပေးဂျာ ….။